Tue, Jun 2, 2020 at 12:06pm
प्रतिक्षित फिल्म ‘रज्जा रानी’को टिजर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं कार्तिक १६। प्रतिक्षित फिल्म ‘रज्जा रानी’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । ५० सेकेन्डको लामो टिजरमा फिल्मका मुख्य अभिनेता नाजिर हुसेन र कामेश्वर चौरासिया फिचरिङ भएका छन् । टिजरमा निकै रोचक अनि हास्यव्यङग्य दृश्य समावेश गरिएको छ । यसमा नाजिर मोटरसाइकल हाक्ने प्रयासमा छन् भने कामेश्वर उनलाई सहयोग गर्ने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । निर्देशक यम थापाको निर्देशन बनेको यस चलचित्रलाई रमेश..
ऋचाकोे अवतारमा ‘सुनकेशरी’को फस्टलुक सार्वजनिक
काठमाडौं कार्तिक १४ । नेपाली सिने जतगकी चर्चित नायिका ऋचा शर्माद्धारा अभिनित चलचित्र ‘सुनकेशरी’को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ । अष्ट्रेलियामा सम्पूर्ण छायांकन सकिएको यो चलचित्रलाई सन् २०१८ अप्रिलमा रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ । अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका भिम न्यौपाने र नायिका शर्माको संयुक्त लगानीमा यो चलचित्र निर्माण भएको हो । पहिलो चलचित्र निर्माणमा असफलता व्यहोरेकी नायिका ऋर्चाले दोश्रो चलचित्र पनि निर्माण गरेकी..
‘रेस–३’ मा सलमान र ज्याकलीनसँगै अब बबी देओल
एजेन्सीहरु, मुम्बई । चर्चित बलिउड सिनेमा ‘रेस ३’ मा अभिनय गर्ने कलाकारहरुको टुङ्गो लागेको छ । यसअघि नै सुपरस्टार सलमान खान रहने निश्चित भएको यस सिनेमामा अब पुराना चर्चित अभिनेता बबी देओलको समेत एक्सन हेर्न सकिने भएको हो । एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘रेस ३’ आफ्नो समेत संलग्नता रहने कुराको जानकारी स्वयम् बबीले नै ट्वीटमार्फत दिएका हुन् । साथै, चलचित्र रेसको टीमसँग..
बरुण धवनको ‘जुड्वा-२’ ले तीन दिनमै कमायो ६० करोड
मुम्बई (एजेन्सी) । गत शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको बरुण धवन, ज्याकलिन फर्नान्डिज र तपसी पन्ननुको अभिनय रहेको फिल्म ‘जुड्वा २’ ले बक्स अफिसमा धुम मच्चाएको छ । साथै, यस सिनेमा आफ्नो पहिलो दिनको कमाईको आधारमा नै ‘जुड्वा २’ यस बर्ष सबैभन्दा धेरै कलेक्सन गर्ने चौथो फिल्म बन्न समेत सफल भएको छ । बरुणका आफ्नै बाबु डेबिड धवनले निर्देशन गरेको यस फिल्मले पहिलो दिनमा १६.१०..
शिव श्रेष्ठका छोरा मनिष सुन्दर, जो गर्देछन् 'रानी' बाट डेब्यु !
नजिकैको बलिउड सिनेमा इण्डष्ट्रिजमा नाताबाद पनि उत्तिकै बिक्दै आएको छ । ऋतिक रोशन, सलमान खान, सैफअली खान, करिना कपुर, आलिया भाट, टाइगर श्राफ, बरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपुर, श्रद्धा कपुर, अर्जुन कपुर लगायतका थुप्रै नाम चलेका बलिउड कलाकारहरु आ–आफ्नो नजिकको नाता सम्बन्धकै माध्यमबाट सिनेमाको क्षेत्रमा बलियो कदम राख्न सफल भए । तर, नेपालको कलिउडमा भने बलिउडमा जसरी नेपोटिज्म हावी भएको..
एनटीआरको फिल्म ‘जय लव कुश’ ले कमायो २ दिनमै ६० करोड (भिडियो)
- एजेन्सीहरु । एसएस राजामौलीद्वारा निर्देशित प्रभासको मुख्य भूमिका रहेको ‘बाहुबली’ का दुवै संस्करणले भारत लगायतका देशमा मात्र नभई विश्वबजारमा नयाँ तरंग ल्याएसँगै साउथ इण्डियन सिनेमालाई हेर्ने आम दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आयो । त्यसैले त यतिबेला विश्वभर बलिउड फिल्मको जस्तै साउथ इण्डियन सिनेमाका समेत फ्यानहरु बढ्ने क्रम निकै जारी छ । यसैबीच, साउथका चर्चित नायक जुनियर एनटीआरको नयाँ फिल्म ‘जय लव कुश’ ले अर्को नयाँ तरंग पैदा..
‘किक–२’ मा सलमानलाई दीपिकाले साथ दिने
मुम्बई । सलमान खान र दीपिका पादुकोणको जोडी कस्तो होला ? सलमान खानसँग दीपिकाले ‘किक–२’ मा अभिनय गर्ने पक्का भएसँगै यस प्रश्नको जवाफ पनि अब मिल्ने भएको हो । यससँगै चर्चित बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको लामो समयदेखिको सलमान खानसँग सिनेमा खेल्ने इच्छा समेत अब पूरा हुने छ । जनकारीका अनुशार फिल्म ‘किक–२’ को सुटिङ यही वर्षको अन्त्यबाट सुरु हुनेछ भने सन् २०१९ को..
बर्षा- सौगात अभिनित ‘मेरो पैसा खोई’ आगामी कात्तिकमा
काठमाडौं । नायिका बर्षा राउतले अभिनय गरेको चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ आगामी असोज ११ गते रिलिज भएको महिना दिनमै उनी अभिनित अर्को चलचित्र पनि रिलिज हुने पक्का भएको छ । रोज राणाले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘मेरो पैसा खोइ’ले आगामी कात्तिक ९ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकेको छ । उक्त चलचित्रमा नायक सौगात मल्ल र नायिका बर्षा राउतको जोडीलाई मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ..
भारतको मुम्बईस्थित 'आरके स्टुडियो'मा आगलागी
असोज १ । भारत मुम्बईस्थित आरके स्टुडियोमा आगलागी भएको छ । सन् १९४८ मा मुम्बईको चेन्बुरमा राज कपुरले यो स्टुडियो बनाएका थिए । शनिबार भएको आगलागीका कारण टेलिभिजन रियालिटी शो ‘सुपर डान्स सिजन टू’ को सेट जलेर नष्ट भएको छ । ६ वटा दमकल तथा पाँचवटा ट्यांकरको सहयोगमा स्थानीयबासिन्दाले आगो निभाएपछि बल्ल आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । भारतमा निकै चर्चित मानिने यस स्टुडियोमा..
रेखा–आर्यन अभिनित रुद्रप्रियाको ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाण्डौ । यस वर्षको प्रतिक्षित सूचिमा रहेको रेखा–आर्यन अभिनित चलचित्र रुद्रप्रियाको ट्रेलर सार्बजनिक भएको छ । यस चलचित्रबाट नायक आर्यन सिग्देल र रेखा थापा झण्डै ८ बर्षपछी एकैसाथ देखिन लागेका हुन् । यस चलचित्रलाई सुदिप बबी भूपाल सिंहले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रको ‘चिर्बिर–चिर्बिर’ बोलको गीत यसअघि नै चर्चित बनेको छ भने जसमा प्रस्तुकर्ता रेखा थापा स्वयम् देखिएकी छिन् । सरस्वती थापा..
सलमानले दिए वरुण धवनलाई फेरी 'पिट्ने' धम्की !
मुम्बई । भनिन्छ, बलिउड स्टार सलमान खानले रिसको झोकमा कतिबेला के गर्छन् कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले त सलमानलाई कतिपयले घमण्डी तथा रिसाहा नायकका रुपमा समेत चिन्ने गर्छन् । पछिल्लो समय भारतीय सञ्चारमाध्यममा उनको रिसको विषयलाई जोडेर एउटा घटना निकै चर्चामा आइरहेको छ । यतिबेला सलमानले अभिनेता वरुण धवनलाई पिट्ने धम्की दिएको खबरले समग्र बलिउड तातेको हो । सुत्रका अनुशार, सलमानले बरुणलाई..
माघको अन्तिममा सुनिल थापा अभिनीत ‘शेरबहादुर’ आउने
काठमाडौं । चर्चित कलाकार सुनिल थापाको टाइटल भुमिका रहेको नेपाली चलचित्र शेरबहादुर आगामी माघ महिनाको अन्तिम सातामा प्रदर्शन हुने भएको छ । सो चलचित्रमा सुनिल थापा, कर्मा, मेनुका प्रधान र रविन्द्र झा लगायतका कलाकारहरुको मुख्य भू मिका रहेकोे छ । सिनेमा माघ २६ गतेबाट प्रदर्शन हुने जानकारी गराउँदै निर्माण पक्षले फिल्मको पोष्टर सार्वजनिक गरेको हो । धिराज प्रोडक्सनको व्यानरमा निर्मित शेरबहादुरको कथा प्रमोद..
ऋषि धमालकी श्रीमती 'एलिजा' पनि अब ठूलो पर्दामा !
काठमाडौ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमालकी मोडल श्रीमती एलिजा गौतमले एउटा नेपाली चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । लामो समयदेखि फिल्म निर्माण र अभिनय गर्ने ताकमा रहेकी धमला पत्नी एलिजाले काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममाँझ चलचित्र ‘अनुराग’ निर्माण गर्ने तथा आफू स्वयम्ले नै त्यसको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने वताएकी हुन् । सो फिल्ममा एलिजाको अपोजिट रोलमा मोडल दीपक घिमिरे रहने बताइएको छ..
‘छक्का पन्जा २’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
यस बर्षको वहुप्रतिक्षित मानिएको चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’को अफिसियल ट्रेलर र्साजनिक गरिएको छ । यस अघि नै सार्वजनिक गरिएका फिल्मका २ वटा गीतले राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेका बेला अहिले यस चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो । चलचित्रको ट्रेलरमा प्रयोग गरिएका संवादहरु दर्शकलाइ हसाँउने खालका छन् । विकासराज आचार्य कार्यकारी निर्माता रहेको यस सिनेमालाई ‘छक्का पन्जा १’ कै निर्देशक दीपाश्री निरौलाले नै निर्देशन..
दर्शकको माया बटुल्दै ‘ए मेरो हजुर २’
काठमाडौ । पछिल्लो सयमय बहुप्रतिक्षित मानिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ देशभर सार्वजनिक भएको छ । करिब १ दशक अघि बनेको ए मेरो हजुर फिल्मको सिक्वेलका रुपमा सुनिलकुमार थापा र झरना थापाले यस चलचित्रको निर्माण गरेका हुन् । ए मेरो हजुरमा झरना थापा र स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मुख्य भूमिका थियो भने यस फिल्ममा साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र सलिनमान..
राहत संकलनमा कलाकारहरुको सक्रियता
हप्तौंदेखिको अविरल वर्षाले डुबानमा परी जनधनको क्षति व्यहोरेका पूर्वी नेपालका बाढी पीडितको सहयोगका लागि कैयन कलाकारहरुले राहत अभियान नै सुरु गरेका छन् । ती कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् समेत आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेका हुन् । प्रसिद्ध हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले आफ्नो संस्था ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशन’मार्फत महोत्तरीबाट बाढीपीडितका लागि औषधि, खाद्यान्न र त्रिपालसहित अन्य राहतको सहयोग सुरु गरेका छन् । आइतबार नै..
यस्तो छ ‘फाटेको जुत्ता’को टिजर पोष्टर
निर्माता अर्जुन कुमारले निर्माण गरेको चलचित्र ‘फाटेको जुत्ता’को टिजर पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । हालैमात्र सार्वजनिक गरिएको टिजर पोष्टरमा चलचित्रका मुख्य कलाकारलाई भने देखाइएको छैन । एउटा मुख बाधिएको बोरा र फाटेको जुत्ता लगाएका मानिसको खुट्टा मात्र देखाएर पोष्टर तयार पारिएको छ । यो पोष्टरले दर्शकमा कौतुहलता जन्माउन सक्ने निर्माणपक्षको अपेक्षा रहेको छ । आगामी कार्तिक १७ गतेबाट रिलिज हुन लागेको..
‘ड्रिमगल’ को गीत रेकडिङ सुरु
चलचित्र ‘ड्रिमगल’को निर्माण हुने भएपछि त्यसको काम पनि शुभारम्भ गरिएको छ । चलचित्रको गीत रेकर्डिङसँगै यसको काम सुरु गरिएको हो । हाल चलचित्रमा समावेश ‘फूल टिपेर छाड्यौ’ बोलको गीतको रेकडिङ गरिएको हो । अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतमा अर्जुन र दुर्गा खरेलको स्वर, निर्देशक आचार्यको शब्द छ । यो चलचित्रलाई ऋषिराज आचार्यले निर्देशन गर्दैछन् । चलचित्रका कलाकार भने अहिलेसम्म कोहीपनि पक्का..
एजेन्सी : एकएक झगडा भएर धरापमा परेको 'कपिल शर्मा शो ' का चर्चित हास्य कलाकार डक्टर गुलाटीका रुपमा चिनिने सुनिल ग्रोबरले कपिल शर्मा शोको 'राइभल' सो ल्याउने भएका छन्। झगडा भएर पुनः मिलन भएको भनिए पनि 'कपिल शर्मा शो' मा उनी देखिने गरेका छैनन् । ग्रोबरले अब कुनै पनि हालतमा कपिल शर्मा सोमा नफर्किने र बरु आफुले एक्लै नयाँ सो तयारी..
कलैया: पर्यटन प्रवद्र्धनको विकास गर्ने उद्देश्यले यहाँ बिहिबारदेखि सडक खाना महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । ‘सडकमै खाऔँ, सडकमै रमाऔँ’ नाराका साथ सो महोत्सव होटल व्यवसायी सङ्घले आयोजना गरेको हो । बारा–सिमरा–जितपुर उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सिमरा एयरपोर्ट सडकमा आयोजना गरिएको सो खाना महोत्सवमा नेवारी, थारु, थकाली, चाइनिज, भारतीय, इटालियनलगायत गरी ५० भन्दा बढी खानाका स्टल राखिएको छ । शनिबारसम्म चल्ने सो महोत्सवमा रु दुई करोड..
कपिल शर्मा शो अब के होला? पञ्‍जाब कोर्टले सिद्धूलाई पनि खेल्नबाट रोक
एजेन्सी: भारतीय चर्चित कमेडियन टिभी रियालीटी शो 'कमेडी नाइट्‌स विथ कपिल'बाट पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धूले पनि छाड्‍ने भएका छन्। 'चायवाले चन्दु र नानी' ले शो छोड्ने निर्णय गरेसंगै 'सिद्धू पाजी'ले कपिल शर्माको शो छाड्‍ने भारतीय सञ्‍चार माध्‍यमले जनाएका छन्। उनी पञ्‍जाबका मन्त्री समेत हुन्। सिद्धूले कपिल शर्माको शोमा काम गर्नेबारे पञ्‍जाबमा धेरै विवाद भएको थियो। तर उनले काम गर्न भने मानेका..
'कमेडी नाइट्‌स विथ कपिल'मा अब कपिलमात्रै, तीन कलाकारले छोडे कार्यक्रम
एजेन्सी : भारतीय टिभी रियालिटी सोको निकै चर्चित हास्य कार्यक्रम 'कमेडी नाइट्‌स विथ कपिल'बाट 'चायवाले चन्दु' र 'नानी'ले पनि कार्यक्रम छाडेका छन्। यसअघि कमेडियन कपिल शर्मासँगको विवादका कारण सुनिल ग्रोवरले शो छाडेको घोषणा गरेको थिए। त्यसलगत्तै चन्दन प्रभाकर र अली अजगरले पनि शो छाड्‍ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्‍चारमाध्‍यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले शो छाडेपछि कपिल शर्माले एक्लैले किकु शारदा र नवजोतसिंहसँग सुटिङ..
यम बरालको गायनमा आधुनिक गीत आयो बजारमा (भिडियोसहित)
काठमाडौंः अमेरिकामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका राम लामा अविनाशीद्धारा रचित ‘मेरो बदनाम’ बोलको गीत श्रब्यदृश्यसहित बजारमा आएको छ । भावनात्मक शब्दले भरिएको यो गीतमा गायन तथा संगीत यम बरालको रहेको छ । यसमा राजेन्द्र चापागाईं, सिरु बिष्ट, प्रिती मोक्तानको अभियन रहेको छ । गीतमा शंकाले गर्दा आत्मिय सम्वन्धमा कसरी दरार आउँछ ? भन्ने कुरालाई देखाउन खोजिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरु..
मुसहर समुदायका लागि बने यस्ता राम्रा घरहरु, नयाँ बर्षमा हस्तान्तरणः धुर्मुस
काठमाडौंः कालाकारद्धय सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)ले महोत्तरीको बर्दिवासमा मुसहर समुदायका लागि निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना बस्तीका घरहरुमा रंगरोगनका काम सुरु भएको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनमार्फत निर्माण भइरहेको यस परियोजनाको शिलन्यास गरेको करिव साढे दुई महिना नपुग्दै मुसहर बस्ती निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । मुसहर बस्तीको लगभग सबै घरमा छाना छाउने काम सकिसकेको बताइएको छ । अधिकांश..
मुसहर बस्ती निर्माण गर्न धुर्मुस सुन्तलीलाई दुई करोड अभाव
महोत्तरीः महोत्तरीको बर्दिवासमा मुसहर समुदायका लागि सामुहिक आवासमा जुटेका हाँस्य कलाकारद्धय सीताराम कट्टेल (घुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) आर्थिक संकटमा परेको समाचार छ । उनीहरुले खडा गरेको सामाजिक संस्था धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमुना मुसहर बस्तीको अवलोकन गर्न महजोडी (वरिष्ठ हास्य कालाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आर्चाय) शनिबार बर्दिवास पुग्ने क्रममा आयोजना अगाडि बढाउन आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको खुलाशा गरिएको..
‘लाला ल्यान्ड’ को दवदवा रहंदा पनि अन्तत: ओस्कार अवार्ड ‘मुनलाइट’लाई
लसएन्जेल्स (अमेरिका) : प्रसिद्ध अमेरिकी निर्देशक वारी जेनकिन्सद्वारा निर्देशित सिनेमा ‘मुनलाइट’ ले ८९ औँ एकेडेमी अवार्ड (ओस्कार पुरस्कार) अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट तस्बिर पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छ । उक्त सिनेमा यस वर्ष आठौँ ओस्कार छनौटमा परेको थियो भने हालै सर्वोत्कृष्ट चलचित्रका लागि गोल्डेन ग्लोब अवार्ड पनि हात पार्न सफल भएको थियो । ओस्कार पुरस्कारका लागि मजबुत दाबेदार मानिएको लाला ल्यान्डलाई पछि पार्दै..
सेनाले शिवरात्रीमा निःशुल्क प्रवेश सहितको कन्सर्ट आयोजना गर्ने
काठमाडौँ : नेपाली सेनाले पहिलो पटक महाशिवरात्री तथा सेना दिवसको उपलक्ष्यमा सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा ब्यान्ड कन्सर्ट तथा आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । सेना दिवस तथा महाशिवरात्रीको अवसर पारेर सेनाले सर्वशाधरण जनताका लागि कन्सर्ट आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रम यही फागुन १३ गते हुने छ । सोही दिन टँुडिखेलमा आयोजना हुने परेड कवाज तथा विविध कला प्रदर्शनी समारोहपश्चात् साँझ ५..
Results 546: You are at page 17 of 19